TogaHerer: ALSHABAAB OO GOODIYAY KAMPALA IYO BUJUNBURA IYO UGANDA OO KA JAWAABTAY HANJABADA SHABAABKA
ALSHABAAB OO GOODIYAY KAMPALA IYO BUJUNBURA IYO UGANDA OO KA JAWAABTAY HANJABADA SHABAABKA
Kooxda Al-Shabaab ee sida aadka uga soo horjeeda DFKM ah ee Soomaaliya isla markaana ka dagaalanta gudaha Wadanka Soomaaliya ayaa waxaa ay hanjabaad kulul u jeedisay Wadamada Uganda iyo Burundi
Sarkaal ka tirsan Ururka Al-Shabaab oo Shir Jira’id ku qabtay Magaalada Muqdisho ayaa ku hanjabay in Kooxda Al-Shabaab aysan u duulqaadan doonin waxyaabaha ay samaynaayan Ciidamada nabad ilaalinta ee ka socda Wadamada Burundi iyo Uganda ee ku sugan gudaha Wadanka Soomaaliya gaar ahaan Magaalada Caasimada ee Muqdisho.
Sarkaalkaas oo lagu Magacaabo Sheikh Cali Maxamed Xussein oo Saxaafiyinta kula hadlay Muqdisho ayaa sheegay in ay weeraro ku qaadi doonaan Caasimadaha Wadamada Uganda iyo Burundi.
”Waxaana oohin ka keensin doona dadkooda,waxaan weerari doona Bujumbura iyo Kampala.dagaalkeena waxaan gaarsiin doona labadaas Caasimadooda,waxaanu gaarsiin doona jab xoogan”,ayuu yiri.
Waxaa u sheegay in ay sii xun uga caroodeen waxaa u ugu yeeray xasuuqi shalay ay Ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM ka geysteen Suuqa Bakaaraha ee Magaalada Muqdisho halkaas oo ay ku duqeyeen madaafic ka dib marki Kooxaha Mucaaradka ay iyaguna duqeyn u geysteen garoonka diyaaradaha xilli u halkaas ka duulaayay Madaxweynaha DFKM ah ee Soomaaliya Shariif Sheikh Axmed oo u ambabaxay Magaalada Kampala ee Caasimada Uganda.
Ma jirto ila iyo iminka wax jawaab ah oo ay ka bixisay wadanka Burundi hanjabaada kulul ka soo yeertay Kooxda Al-Shabaab, balse isagu waxa ka jawaabay Wadanka Uganda .
Dagaaladi iyo duqeymihi shalay ay is dhaafsadeen Ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM iyo Kooxaha Mucaaradka ayaa la soo sheegaaya in u sababay dhimasho dad gaaraya 30-qof dhaawac dad ka badan 60-qof sida ay ku warameeen Saraakiisha Caafimaadka.
Dowlada Wadanka Uganda ayaa waxaa ay ka jawaabtay hadal ka soo yeeray Kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta gudaha Wadanka Soomaaliya in ay weerari doonto Wadamada Burundi iyo Uganda.
Madaxweynaha Wadanka Uganda Yoweri Museveni oo galabnimadi maanta Saxaafada kula hadlay Magaalada Kampala ee Caasimada Uganda waxaa u sheegay in hanjabaada Al-Shabaab aysan saamayn ku yeelan doonin amaanka Uganda.
Waxaana u sheegay in hadii ay isku deyaan in ay soo weeraraan Wadankiisa,ay Dowladiisa jawaab deg deg ah ka bixin doonto isla markaana ay sii adag ula dagaalami doonto Kooxda Al-Shabaab.
”Marnaba yeeli mayno in ay nasii weeraraan Al-Shabaab,hanjabaada ay soo saareen ma ahaan mid saamayn nagu yeelan karta”,ayuu yiri isagoo sii caro leh ka jawaabayay Su’aal ahayd sida uu arko hanjabaada ka soo yeertay Kooxda Al-Shabaab.
Waxaana u ugu dambaynti sheegay in ay Xukumada Uganda ay sii wadi doonto howlaha nabad ilaalinta ay ka wado gudaha Dalka Soomaaliya,iyadoo u diiday in u ka hadlo duqeymihi shalay ka dhacay gudaha Magaalada Muqdisho oo ay ku dhinteen dad aad u tira badan oo rayid ah oo lagu eedeyey in ay ka dambeeyeen Ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM ee ku sugan Magaalada Muqdisho.
Kooxda Al-Shabaab ayaa ku hanjabtay in ay weerari doonto Magaalooyinka Kampala iyo Bujumbura ka dib marki ay ku eedeyeen in Ciidamada AMISOM ay shalay xasuuq u geysteen dad rayid ah ka dib marki ay Madaafiic ku garaaceen Suuqa weyn ee Bakaaraha.
Posted by togaherer at 09:18